Fitsapana ho an'ny glucose amin'ny fitondrana vohoka
Mba hahitana ny fahasamihafana toy ny diabeta miteraka, ny vehivavy dia nomena fitsapana ho an'ny fandeferana glucose mandritra ny fitondrana vohoka, izay atao mandritra ny 24 ka hatramin'ny 28 herinandro ao amin'ny vehivavy bevohoka. Diniho ity antsipiriany ity amin'ny antsipiriany, hitoetra amin'ny antsipirihany amin'ny algorithm ny fitarihana sy ny fanombanana ny vokatra.
Amin'ny toe-javatra inona io fitsapana io dia obligatoire?
Ny antsoina hoe famantarana ho an'ny fitarihana fianarana toy izao dia:
ny fisian'ny diabeta amin'ny anamnesis an'ny havana akaiky;
ny fisian'ny fahadisoam-panantenana amin'ny anamnesis;
zana-doko lehibe nandritra ny fitondrana vohoka taloha;
Ny taonan'ny vehivavy bevohoka dia mihoatra ny 35 taona.
Ahoana no atao amin'ny fitsaboana glucose mandritra ny fitondrana vohoka?
Tsara homarihina fa maro ireo karazana fianarana toy izany. Ny fahasamihafana dia ny fanesorana ny vokatra azo atao amin'ny fotoana samihafa. Izany no antony nanomezany adina iray ora, adin'ny roa ora sy telo ora. Araka ny karazan'ny fitsapana amin'ny fandeferana glucose, atao mandritra ny fitondrana vohoka, dia misy ny fitsipika hafa , ny lanjany dia raisina an-tsakany amin'ny fanombanana ny vokatra.
Ny rano sy ny siramamy dia ampiasaina amin'ny fianarana. Noho izany, mandritra ny adiny iray isa ny 50 gram, 2 ora - 75, 3 - 100 grama siramamy. Esory izany amin'ny rano misotro rano 300 ml. Ny fitsapana dia tanterahina amin'ny vavony tsy misy. 8 ora alohan'ny sakafo, dia voararan'ny rano. Ankoatra izany, mandritra ny 3 andro mialoha ny sakafo dia tandremana: esory ny sakafo fihinana, mamy, mamy.
Inona no fitsipika napetraka rehefa mamaritra ny vokatry ny fitsaboana glucose mandritra ny fitondrana vohoka?
Tsara ny manamarika fa ny dokotera ihany no manan-jo handinika, ary hanatsoaka hevitra. Ankoatra izany, ity fianarana ity dia tsy azo raisina ho vokatra farany. Ny fanovana ny fanondroana dia mety hanondro ny fihanaky ny aretina, fa tsy ny fisiany. Noho izany, tsy mahazatra ny fiverimberenan'ny fitsapana. Ny vokatra iray ihany amin'ny toe-javatra roa dia ny fototry ny fijerena akaiky ilay vehivavy.
Ny soatoavina amin'ny fitsaboana glucose amin'ny fanatontosana natao nandritra ny fitondrana vohoka dia valin'ny fitsapana fotsiny avy amin'ny karazana fianarana. Tsara homarihina fa ao anatin'ny 95 mg / ml ny fatran'ny glucose mifady hanina.
Amin'ny fitsapana mandritra ny adiny iray, raha mihoatra ny 180 mg / ml ny siramamy, dia voalaza fa misy ny aretina. Rehefa mitarika fianarana 2 ora dia tsy tokony hihoatra 155 mg / ml ny glucose, miaraka amin'ny fianarana 3 ora, mihoatra ny 140 mg / ml.
Fahavoazana ho an'ny ultrasound amin'ny fitondrana vohoka
Ny herinandro faha-24 amin'ny fitondrana vohoka - ny fivoaran'ny foetus
Ny fitsaboana amin'ny fahazazana
Fitsaboana ho an'ny fampitahorana ny famotsoran-keloka tany am-boalohany
Ny knee-elbow posture amin'ny bevohoka
Stress nandritra ny fitondrana vohoka
Ny lohan'ny foza
25 antony marim-pototra hanasarahana mpivady tia
Recipe amin'ny sôkôla mafana
Ny matanjaka SWOT
Ahitana voaloboka sy pòm ho an'ny ririnina
Ahoana ny famehezana ny jiromotra bolone?
Andro iraisam-pirenena ho an'ny mpifanolo-bodirindrina
Mialà ao Karelia amin'ny ala amin'ny fiara
Nampahafantarin'i Kristen Stewart ny rainy tamin'ny malalany
Voangol-boankazo misy ovy
Ahoana no hanasitranana vitiligo?
Mitondra kitapo ho an'ny ampakarina amin'ny tananao
Plasmapheresis - "ho an'ny" sy "manohitra"